Namuhla yonke ibhizinisi idinga amasevisi yezokuthutha, ngakho inani izinkampani zokuthutha kuphela zikhule, akhethe okuhle kuba nzima ngokwengeziwe. Konke sekumi ngomumo ezahlukene amasevisi, isibalo sezimoto kanye nezinye izici ezingase zithinte ukukhetha yenkampani.
Wonke umuntu ufuna ukuthutha inkampani wagcwalisa zonke izimo yesivumelwano waphetha, ukuletha izimpahla umsulwa futhi ngaphandle kokulibala. Ukuze sikhethe kahle ukulandela iseluleko esilula ongoti ababeye babhekana nakho:
Le nkampani, esihlinzeka izinsizakalo zokuhamba, kumelwe unelayisensi kwasekuqaleni. layisensi aphethwe iningi izinkampani, kodwa namanje kukhona labo abangekho. Ngokuvamile baye kungekho ekuqaleni nemisebenzi yabo amafemu kanye nezinkampani ezincane, ukuphetha isivumelwano nabo kubaluleke ngokubhala. Lokhu kuzosiza ukugwema ukubambezeleka nezinye izinkathazo.
Udinga ukuba banakekele umshwalense wezimpahla. izinkampani Zibe Abantu Abadala Abavuthiwe musa ngamasevisi umshwalense, noma bakwenze kube yinto inqubo saziso. Njalo usomabhizinisi kumele uqonde ukuthi umshwalense akuyona sadlala imali futhi isiqinisekiso esongeziwe uma kwenzeka ingozi.
inkampani Serious ubala zonke umshini we izimoto zawo, futhi nganoma yisiphi isikhathi ngeke uyithole impendulo yokuthi yayikuphi. amasevisi Logistics zihamba phambili, lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba iqaphe ukuhamba wezimpahla. Ezinye izinkampani zibavikele ngesikhathi ezokuthutha, kulula kakhulu nalapho bethutha okusanhlamvu okubalulekile.
Kubaluleke kakhulu iyona engu-inkampani, likhuluma ngalokho abhekana nakho nokwethembeka. Ubudlelwane obuhle ezisebenza iminyaka eminingi seluvele imikhumbi elikhulu ezokuthutha ukuthuthwa zonke izinhlobo zezimpahla. Impumelelo yazo kungenxa kahle ukusebenza kwabasebenzi abanolwazi, kusukela Movers elula abameli ukubhekana nezindaba ezibalulekile ezihlobene yezimpahla.
Ukwethenjwa abasebenzi esinenhlonipho nabanekhono. ku nokwamukela oda umphathi ubophekile ukuba aphendule yonke imibuzo, uma kukhona ubunzima ku zokuxhumana, kungase kube iphutha laleyo nkampani.
izinkampani zokuthutha Beginners ukuheha amanani amakhasimende aphansi emisebenzini yabo, ngakho-mkhathi i-eziningi izindleko ingenye indlela ebalulekile okukhethiwe. Ochwepheshe batusa ukuba ulondoloze imali, Wabasaqalayo kule ndawo kungase kungabi ujwayelene zonke butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela ezokuthutha. Abasebenzi Business Line ngokushesha ukuthola indlela yokuphuma kwanoma iyiphi, ngisho isimo esibucayi kakhulu, ngoba lokhu amakhasimende ngokugcwele baqinisekiswa ukuthi izimpahla zabo. Nenkampani okuthembekile izimo ezinjalo awavamile.
Usebenzile yensimbi amasango zivuleka
Izimvume ye SRO esakhiweni: zinhlobo uhlu. Registry tolerances SRO ekwakhiweni
Tour opharetha "Inters": izinkambo AseYurophu asizange oda?
"Agribusiness" inyama: impendulo izinga kwemikhiqizo
Ukuphrinta bekhompuyutha, oluphathwayo nezinye amakhalenda ne ukuthuthukiswa design
Gaz-3507 (saz): umlando, izici ngokomzimba,